IKhabhinethi yokuLondoloza ye-Self Catering enemibono yolwandle emangalisayo. - I-Airbnb
IKhabhinethi yokuLondoloza ye-Self Catering enemibono yolwandle emangalisayo.
ILuogh Lodge yindawo epholileyo, etofotofo yokuzenzela ukutya okuzenzelayo kwindlela yaseWild Atlantic, eneembono zepanaromic okanye ulwandlekazi lweAtlantiki, iZiqithi zeAran kunye neDoolin Pier.
Sikwindlela yelizwe ezolileyo ephakathi kwelali entle yaseDoolin kunye neeCliffs zaseMoher. Nokuba ungumntu othanda ukuhamba okanye ufuna ukuphumla sinesiseko esifanelekileyo sakho, jonga ukutshona kwelanga okanye i-surf iqengqeleka isuka eAtlantiki kwindawo yokuhombisa yabucala.
Ikhabhathi ye-Log inegumbi elinye lokulala eline-en-suite elinebhedi epholileyo ephindwe kabini kunye neshawa yombane. Indawo yokuhlala evulekileyo yekhitshi ineebhedi ezitulo ezibini kunye ne-smart tv eneNetflix, indawo yekhitshi ine-oveni yombane kunye nehobhi, ifriji/ifriji, iketile kunye netoaster.
Zonke iipleyiti, iikomityi, izixhobo zokupheka kunye nezixhobo zokupheka zinikezelwe. Sikwabonelela ngamashiti kunye neetawuli ngexesha lokuhlala kwakho. Isidlo sakusasa asibonelelwanga kodwa sinikezela ngepakethi eyamkelekileyo ukulungiselela iimfuno zakho ezisisiseko.
Sine-WiFi yasimahla kodwa sihlala emaphandleni ngoko ngamanye amaxesha amandla omqondiso anokuba buthathaka, ke ndicela ube nomonde !!!
4.97 · Izimvo eziyi-195
Kuninzi ekufuneka kwenziwe kule ndawo intle intle.
Ndwendwela i-Cliffs ye-Moher yeeNdwendwe zamava eku-2.5km ukusuka kwindlu yethu, thatha uhambo oluzolileyo ukuya kwi-Doonagore Castle ehamba imizuzu engama-20 okanye ukuhamba ngemizuzu emi-3 ukuba uziva udiniwe!
I-Doolin Pier yi-3.9km ezantsi kwendlela apho unokuthatha uhambo lokuphumla oluya kwiZiqithi ze-Aran okanye ufumane i-Cliffs ye-Moher cruise (imozulu evumayo) izikhitshane eziqhelekileyo zihamba ngoMatshi ukuya ku-Oktobha.
Imiqolomba yaseBurren kunye ne-Aillwee kufuneka uyibone ngelixa ulapha, malunga ne-27km ukusuka kwindlu yethu.
ILahinch yi-11.3km yindlela entle yokuqhuba ngaselunxwemeni inonxweme oluhle olunesanti kwaye idume ngokusefa nokudlala igalufa.
Emva kwayo yonke loo nto yokubona kutheni ungaphumli kwiindawo zokushicilela ezidumileyo zeDoolin kwaye uphumle ukumamela uMculo weSintu saseIreland.
Zonke ii-pubs zineeseshoni zomculo ngexesha leenyanga zasehlotyeni, iinyanga zasebusika zinokwahluka.
Sihlala kwipropathi ngoko siyafumaneka ukuze sincede nangayiphi na indlela esinako.